Ithegi: Imithombo yeendaba | Martech Zone
Vlocity: AmaNqaku oTshintsho lokuThengiswa kweNtengiso kunye neZakhono zoTshintsho
NgoMvulo, Novemba 18, 2019 NgoLwesibini, Novemba 19, 2019 Douglas Karr
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu IVelocity liqonga elinika amandla usetyenziso lwamafu ukusuka ekufudukeni kwedatha ukubuyela e-ofisini, ukuthengiswa kwe-omnichannel kunye nenkonzo yeselfowuni kunye nohlalutyo.
NgoMgqibelo, ngoMeyi 17, 2008 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu Ku-Agasti ophelileyo ndibhale ngomsebenzi wam omtsha ePatronpath. Oku kube ngumceli mngeni kwiinyanga ezisi-8 ePatronpath kodwa ishishini liyazibonakalisa kaninzi. Ikota yethu yokuqala ibinkulu kunonyaka ophelileyo kwaye abathengi bethu banamanani aphindwe kabini ekukhuleni kwethu ngaphakathi besebenzisa urhwebo kunye nezisombululo ze-ecommerce. Izolo ebusuku, siphumelele amabhaso eMira kwiNkampani yeNkcukacha yeTekhnoloji yoLwazi yaseIndiana! Elona candelo licelomngeni kwimizamo yethu, kukude, kukudibanisa neRestaurant